Home News Dablay hubaysan oo Muqdisho kutoogatay Wiil dhalinyaro ahaa
Dablay hubaysan oo Muqdisho kutoogatay Wiil dhalinyaro ahaa
Kooxo hubeysan ayaa Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir ku dilay Wiil dhalinyaro ah, kaasi kamid ahaa dadka deegaanka degmadaas, waxaana baxsaday ragii ka dambeeyay dilkiisa.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in Wiilka lagu hor dilay Albaabka gurigiisa oo ku yaalla Xaafadda Al Baraka ee Degmada Hodan.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Wiilka dhalinyarada ahaa ay dileen rag burcad ah, iyagoona falka kahor isku dayay inay ka qaatan Mobil uu heystay, hayeeshee uu diiday, sidaasina lagu toogtay.
Marxuumka la dilay ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyay Maxamed, waxaana dad yaqaanay ay sheegeen inuu ahaa Wiil dhalinyaro ah oo aad u firfircoonaa.
Degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanayay dhac ay geesanayaan kooxo hubeysan, iyagoona shacabka ka qaadanayay waxyaabaha ay gacanta kusitaan.
Xaaladda dhabta ah ee Magaalada Muqdisho waa sidaan waxaana ka jirta fowdo cid kasta magan u tahay. Kooxaha wax dilaa uma kala soocna Waayeel, dhallinyaro, haween Iyo cidkasta oo ay damcaan. Waxaana mar waliba lagu soo xeraa hadal kasta goöbtä waa ka baxsadeen dableydii , ciidanka ayaa baaris halkaas ka wada. Ogow ciidanka qofna uma soo qabtaan waxa dhacay oo waxaaba laga yaabaa kuwa wax baarayaa inay ka mid yihiin shakhsiyaadkii dilka fuliyey.
Waxaan rajeyneynaa inuu culeysku iyo xanuunka uu gaaro meel loo adkeysan waayo si loogu midoobo oola isaga dulqaado dowladdaan dalka Iyo dadka baabi’isay.